mobile phone များအတွတ် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > FAQ & Request Zone > တောင်းဆိုရန် > Applications > mobile phone များအတွတ်
View Full Version : mobile phone များအတွတ်
mobile phone များအတွတ် မြန်မာစာ font လေးတွေကိုတီထွင်ပေးကြပါ တကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း မျှဝေပေးကြပါ နောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အကျယ်အပြန့်အသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည့်ထားလို့ပါ ကျွန်တော်ကတော့ အစွမ်းမရှိတော့ အကို၊အမ တို့ကိုပဲအားကိုးရတော့မှာပဲ
ကျွန်တော်တော့ မတီထွင်နိုင်သေးဘူးဗျ .. ;D ;D ;D ဒီမှာ (http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=2822) သွားရောက်လေ့လာကြည့်ပါဦး ...
အစ်ကိုတို့အစ်မတို့ကျွန်တော့ကို ကူညီကြပါအုံး။ ကျွန်နော် ဖုန်းကို password နဲ့ ပိတ်ပြီး မေ့သွားလို့
ဘယ်ဖုန်းအမျိုးအစားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် PASSWORD နဲ့ သော့ခတ်ထားတဲ့ ဖုန်းရဲ့password ကိုရှာဖွင့်လို့ ရနိုင်တဲ့ SOFTWARE လေးကူညီကြအုံး ခင်ဗျား။
အကိုက ဖုန်းကို F-Secure လို ဆော့ဖ်ဝဲ မျိုး သုံးပြီး Password ပိတ်ထားတာလား ။
ဆော့ဖ်ဝဲလ် နဲ့ ပိတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒီနေရာလေး (http://www.ehow.com/how_4810931_unlock-cell-phone-password.html) ကို တချက်လောက်သွားကြည့်ဖို့ လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အကို့ဖုန်းအမျိုးအစားကို သိရင် ကူညီရတာပိုလွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
nokian5800 အတွက် slideunlook လေးလိုချင်လို.ပါဗျ ကူညီကြပါနော် ime က 353205031595331 ပါ တစ်ခါတည်းတောင်းလိုက်တော.မယ်
ဆော.ဝေးတွေကို ကို. ime နဲ. pc မှာsing လုပ်တဲ.ဆော.ဝေးလေးပါရရင်လိုချင်ပါတယ် easy sing လားမသိဘူး ကူညီကြပါဗျာနော် ဒီမှာ ဖုန်းခလုပ်ကလည်းပျက်တော.မယ်
Nokia 5800 အတွက် SlideUnlock Software လေးက အောက်ကလင့်ခ်မှာရှိပါတယ်။ ဟုတ် မဟုတ်တော့ ကျွန်တော်မသိဘူးနော်.. လိုက်ရှာပြီးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ
အစ်ကိုရေအဆင်မပြေဘူးဗျ software ကတော.ရတယ် keygen ကမရဘူး ဖြစ်နေတယ် ကီးဂျန်ကို pc ဖြည်ပေးလို.ရတဲ. software (or) easy sing software လေးမစပါအုံး thinkchange keygen. exe လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ
အစ်ကိုတို.ရေ ကျွန်တော်ဆော.ဝေး1ခုရထားတယ်ဗျ ဒီဆော.ဝေးက ကို.ဖုန်းကို မြန်မာလို ပြတယ်ပြီးတော. contacts မှာလည်းနာမ်မည်တွေကို မြန်မာလိုရေးလို.ရတယ်
ဆော.ဝေးနာမ်မည်က SymbianMyanamr ပါ ဒါပေမဲ.ကျွန်တော.မှာ ကီးမရှိပါဘူး ကူညီရှာပေးကြပါလို.အပူကပ်ပါရစေ